IGAD oo War kasoo saartay rabshadaha ka dhacay Muqdisho - Awdinle Online
IGAD oo War kasoo saartay rabshadaha ka dhacay Muqdisho
Urur goboleedka IGAD ayaa walaac xoogan ka muujiyey dagaaladii ugu dambeeyay ee Ciidamada dowladda iyo Ciidamada Millateriga ee taageersan Mucaaradka ku dhexmaray Xaafado ka tirsan Magaalada Muqdisho.
Qoraal kooban oo kasoo baxay Urur Goboleedka IGAD ayaa waxaa loogu baaqay dhinacyada inay is xakameeyaan, isla markaana badnaadiyaan nafta iyo Guryaha dadka rayidka ah.
“IGAD waxay si qoto dheer uga walaacsan tahay rabshadaha ka socda magaalada Muqdisho waxayna ku boorinaysaa dhamaan dhinacyada inay ku dhaqmaan wax walba oo xakameyn ah, ayaa lagu yiri” Qoraalka IGAD.
Sidoo kale IGAD ayaa ugu baaqday hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay ku laabtaan wada hadalka & sii wadida wadada lagu xalinaayo qalalaasaha doorashada si xal loo gaaro.
Beesha Caalamka ayaa waxaa ay wadaa dadaalkii ugu dambeeyay ee ku aadan sidii xal looga gaari lahaa xiisada u dhaxeeya dowladda & mucaaradka, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in goobihii lagu dagaalamay langreynaayo Ciidamo ka tirsan AMISOM.
Previous articleSoomaaliya oo heshiis la saxiixatay Midowga Afrika
Next articleGuddoomiyaha Aqalka Sare oo ka digay tallaabooyinka ka hor imaanaya Dastuurka Dalka